JACEYLKII DUGSIGA DHEXE ( 4) - Caasimada Online
Home Warar JACEYLKII DUGSIGA DHEXE ( 4)
JACEYLKII DUGSIGA DHEXE ( 4)
Qqeybtii 4-aad halkan ka aqriso qeybihii hore Qeybti 1-aad, Qeybti 2-aad. Qeybtii 3-aad
Sannadkaas 1974 waxaa loo balansanaa marka Dugsiga dhamaado oo la xiro in Ardeyda oo dhan loo diro Ololaha wax baridda Reer Miyiga oo markii danbe lagu magacaabi jiray ( Ololaha Hormarinta Reer miyiga ) loona soo gaabin jiray ( OHRM) !!! .
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Ostan macallinkiisii Xisaabta la weydiiyey ma laga yaabaa in uu Ostan ka qeyb qaato ( OHRM) Da,diisa oo yar Daraadeed, wuxuuna ku jawaabay waa laga yaabaa inkastuu gaaban yahay.
Markii Dugsigii la xiray Bishii July, 1974 ayaa Ardeydii Dugsiyadda oo dhan marka laga reebo Fasalka Sideedaad ee Dugsiga Dhexe iyo Fasalka 4aad ee dugsiga Sare ( Form four) oo ayagu lahaa Imtixaankii Dugsiga dhexe iyo kii Dugsiga sare oo ayaga loo reebay in ay Imtixaanka kama danbeysta ah galaan.
Sidii bay u dhacday Ostan iyo Dugsigiisii 21 oktaabar wiilasha waxaa lagu qoray Gobolka Bakool, Gabdhihiina waxaa lagu qoray Gobolka Shabeellada Hoose .
Maalintii Ardeydu baxayeen maalmo ka hor ayaa waxaa Dugsigii loogu qeybiyey Ardeydii Sabuurad yar oo isku laabmeysa,oo Busto ku dhex jiro iyo Buraashad yar , kadibna waxaa la balamiyey in ay Maalin Hebel Dugsiga isku soo Xaadariyaan ayagoo Nin ba Sanduuq uu Dharkiisii ugu jiro wata, sidaas bayna u Dhacday oo Maalintii la balamay ayey Dugsigii yimaadeen ayadoo Baabuur u Diyaar tahay waa Baabuurtii Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Waxaa Ardeydii Dugsiyadda Xamar oo dhan la iskugu geeyey Tarbuunka si uu Khudbad Dardaaran ah ugu jeediyo Madaqxweynaha Jaalle MOHAMED SIYAAD BARRE , kadibna halkaas ayey Safarkoodii ka bilaabeen ilaa Maqribkii ay ka gaareen magaallada Baydhabo
janaay, halkaas oo Casho loogu diyaariyey se Nasiib xumo Soor iyo maraq iyo Hilib baa lagu sooryeeyey se Ciyaal Xamarku waagaas Soor cunowga wey ka faani jireen, oo waxay jeclaayeen Bariis iyo Baasto.
Markii Cashadii loo soo dhigay oo kooxba xeero loo soo dhigay sidii sabtii ayey intey Hilibkii ka Boobaan Soortii isku tuur tuureen .
Alloow Nin aan wax ogeyn ha cadaabin wallee wey ka shalaay doonaan Soortaas oo waxa gadaal ka dhici doonta ayadoo Caano iyo Hilibba laheyn in ay Mudan doonaan ileen Abaartii Daba dheer ayaa soo socotee !!!!
Habeenkii Magaalladii bay aadeen oo Shaneemadii ugu danbeysay ayey galeen ileen Toddobo Bilood ku dhan Baadiyo ayey u socdaane.
Subaxdii goor hore ayaa la Quraacday kadib Safarkii Gobolka Bakool ayey Bilaabeen Duhurkii ayey Degmada Waajid Gaareen Qeyb ka mid ah Ardeydii oo uu ku jiro Ostan Saaxiibkiis Hunboow ayaa lagu dejiyey oo Degmadaas loo qeybiyey, waa qeyb ka mid ah Dugsigii 21 Oktoobar.
Galabtii ayey haddana gaareen Magaallo Madaxda Gobolka Bakool ee Xudur halkaas ayaa casho fiican Bariis iyo Hilib laga siiyey.
Subaxdii danbe Safar kale ilaa Degmada Tayeegloow waxaan galnay Habeenimo Tayeegloow , Ostan iyo Ardeyda kaleba waa markii ugu horeysay ay maqlaan Magaallada Tayeegloow .
Magaallada Tayeegloow waa Degmo ka tirsan Gobolka Bakool waxayna u dhaxeysaa Magaallada Xudur iyo Baladweyne oo ah magaallo Madaxda Gobolka Hiiraan.
Tayeegloow waa magaallo yar oo Dhismaheedu yahay Carshaan iyo Mudul iyo Xero weyn oo Wareegsan oo Dhagax adag ka sameysan oo ahaan jirtay Qalcad ka mid ah Qalcadahii Sayid Mohameed Cabdille Xasan !!!!
Xeradaas ayey Daawladda oo dhami degan tahay Boliiskii iyo Maamulkii Degmada iyo , wasaaradihii sida Boostada Iwm , Xaruntii Dawladaha Hoose ee Munashiibiyo , Ambulatooriyadii iyo Farmashihii oo isku yaala Iwm.
Subaxdii Danbe Ardeydii Baabuur ayaa laga buuxiyey si loogu qeybiyo Tuulooyinkii ay ka koobneyd Degmadu , waxaana ugu weyneyd Tuulooyinkaas tuulada Caanka ah ee Bilooyeey Xarunta uu ku aasnaa Shiikh Awees AL-Qaadiri ee Siyaaradiisa loo tagi jiray.
Galabtii danbe markii ardeydii la wada qeybiyey ayaa qeybtii ugu danbeysay lagu dajiyey Tuulo la yiraahdo Haraarsame, Ardeydii halkaas lagu dajiyey waxaa ka mid ahaa Ostan Saaxiibkiis Maxamuud ooy isku xaafad ahaayeen.
Qoraxdii oo sii dhaceysa ayuu Ostan Allaah ka baryey in aan meeshaan cidlada ah lagu dajin, Allaahna waa ka aqbalay waxaa la soo celiyey Ostan iyo seddex Saaxiibadiis ah sida kii ka Qishi jiray ee Dartiis Fasalkii 6aad C uga soo gudbay iyo sidoo kale saaxiibkiisii kale ee maalintii Maryan la dili rabay la socday ee Xuseen iyo kan afaraad oo ahaa Xasan oo Ostan isku fasal ahaayeen Ciyaal Hindi na ahaa ooy asaga iyo Ostan sheekadu iskugu bixi jirtay, Afartoodii waxaa la yiri tuulooyinka Degmada u dhaw ha la kala geeyo, Markaas ayaa xuseen iyo Cumar is doorteen waxaanna la geeyey Xero Ciidan oo ku taal Duleedka Degmada lana oran jiray Misir.
Waxaa Xeradaas ku jirayu Ardey Reer Xamar ah oo Fasalka Sideedaad ku soo dhacday oo Ciidan la qori jiray, waxaa ka mid ahaa wiil Kubbadda Cagta Laacib ku ahaa oon haatan magaciisii Hilmaamay.
Ostan iyo Saaxiibkiis Xasanna waxaa la geeyey Tuulo u muuqata Degmada oo la yiraahdo Shiimo, waxaa tuuladaas deganaa Dad dan yar ah oon xoolo laheyn oo Beeraleey ah oo Ugaarato ah sida Sagaaradda iyo wixii la mid ah.
Xasan wuxuu Ostan kaga fiican yahay Reer Baydhabo ayuu ahaa oo afka Mayga si fiican buu u yaqaanaa se Ostan oo Ciyaal xamar ahaa wuxuu ka kasayaa ( ARIIROOW MAY FADAASE ) oo dadka afka mayga ku hadlo lagu foorjeyn jiray ama lagu xifaaleyn jiray.
Xasan Ciyaalkii Tuulada ayuu saaxiib la noqday oo Sagaarada la soo dabtaa se Ostan Xaafadda ayuu fadhiyaa oo galabtii Kitaab Quraan ah ku Akhristaa Ardaaga Buulka ay degan yihiin, oo mar marka qaarkood gabar yar oo Reer dhalay ay Badar ku Shiideyso ayadoo Af May ku heeseysaa taas oo uu Ostan mar marka qaarkood ka biqi jiray in uu halkaas cidlada ah ku dhinto oo uusan mar danbe magaalladii xamar iyo Shaneemooyinkii ku noqon doonin.
Ostan iyo Xasan Subax kasta degmada Tayeegloow bay iska aadaan oo maqaayadaha wax ka soo cunaan ,galabtiina soo laabtaan ayagoo garbaha is haysta oo Aflaam Hindi ah iskaga sheekeynaaya Sida Faaris, Hamjooli, Anjaana,Waqti iyo Sangam IWm.
Maalintii danbe ayaa Kormeerihii Ardeyda iyo Diritoorkii Dugsiga 21 Oktoobar ee Diirshe ay ku soo baxaeen Ostan iyo Xasan oo maqaayad cusub oo la yiraahdo Caga weyne iska Fadhiya , markaas baa lagu yiri aaway tuuladiinii iyo Ardeydii aad wax u dhigi laheydeen.
Waxay ku andacoodeen Tuuladu wax aan wax u dhigno ma aanan arag oo Dadweynuhu ma diyaarsana, markaas ayaa Maalintii danbe lagu daray Askari Boolis ah iyo Guulwade si Tuulada loogu diyaariyo oo Dadka loo soo bixiyo, waxaa kaloo la go,aansaday in Tuulada Shiimo tuulo ku dhagan oo la yiraahdo Shiiloow labada macallin mid la geeyo oo uu subaxdii wax ka soo dhigo se isku meel ay Seexdaan Macallimiintu.
Dadweynihii Shiimo ayaa isku raacay in Ostan laga wado oo xasan loo reebo ileen wey is af yaqaanaane, sidaas bayna talo ku dhamaatay !!!!.
Sheekada OHRM oo toddobo bilood socotay waxaad uga bogan doontaan isla sheekada Ciyaal xamar ee ku saabsan Taariikh Nololeedkii Ostan Gacamay sida Qeybtan Jaceylkii Dugsiga Dhexe ba uga mid tahay sheekadaas Dheer ee Ciyaal xamar oon ku soo saari doono Insha Allaah Bogga Caasimada.com (1).
Ostan intii uu ku maqnaa Baadiyaha Tayeegloow wuxuu Tabay dhawr waxyaalood oo noloshiisa ka mid ahaa sida Aragtidii Jaceylkiisa Maryan, Aflaamtii Hindiga ama Cowboys ama Agent sida 007 iwm .
Wuxuu kaloo tabay Ciyaarihii Kubbadda cagta ee uu ka fiirsan jiray Istaadyo Koonis sida Horyaalkii iyo Koobkii Janaraal Daa,uud , sidoo kale ciyaarihii asagu galabtii ku ciyaari jiray caro madowda u dhaxeysay Dugsiga 21 Oktoobar iyo Afasiyooni Xeraddii Ciidamada.
Mar marka qaarkoodna wuxuu Basket Ball ku ciyaari jiray Dugsiga 21 oktoobar dhexdiisa.
Ostan wuxuu kaloo tabay Waalidkiis & wallaaladiis oo uusan muddo toddobo bilood ah uusan arkin, marka laga reebo Aabihiis oo Bil kadib ugu yimid asagoo joogga Tuulladii Shiiloow, iyo Hooyadiis oo Seddex bilood kadib uga daba timid ayagoo Baadiyo la yiraahdo Harqaanka loola guuray oo aad uga fog Tuulladii Shiiloow.
Maalintii markii Ostan Hooyadiis u timid asagoo Duurka wiilal la jira ,waxay ku tiri markay aragtay wiilkaagii baa halkaan joogga isma laheyn, Sababta Baadiyaha dartiis.
Ostan labo Bilood kadibba aad buu ugu hadlaayey Afkii May mayga oo xataa gabayaddooda iyo Maahmaahyadooda iyo Googaaleysigoodaba aad buu u bartay.
Ostan ilaa haatan wuxuu xasuustaa Googaaleysiga ooy dhihi jireen ( tiileeyaa hadale) oo la macno ah Googaa cadlle , wuxuuna ka xasuustaa mid oranaysa [ Bisiq bogshee biyo kalaq ] oo macnaheedu yahay Barida wanka ooy u yaqanaan caleen !!!!.
Akhristoow Dhallintii Iskuulka ee OHRM ( ololaha hormarinta reer miyiga) la keenay waxay barteen in ay waalidkood iyo dadkii ay jeclaayeen ay waraaqo u diraan.
Ostan Fursad ayaa hor timid ah in uu Maryan warqad u diro kuna aadiyo Gabdhaha dugsiga 21 oktoobar ee Degmada Afgooye oo ah meeshii Maryan iyo saaxiibadeed la geeyey.
Akhristoow waad ila socotaa baan filayaa in Ostan ay warqad u diyaarsaneyd Sawir Qurux badan Nin iyo Naag isku dhagan uu ku Sawiray oo uu Maryan u dir is yiri se uu Awoodi waayey.
Warqaddii ayada aheyd oo uu Muddo haystay ayuu Maalintii danbe Baqshad u soo gatay dhanka kore wuxuu kaga qoray KA : OSTAN GACAMAY OO L/H DEGMADA TAYEEGLOOW
dhanka danbana wuxuu ku qoray KU: MARYAM MOHAMED OO L/H DEGMADA AFGOOYE.
Ostan ayaa maalintaas magaallada u soo dhaadhacay Tayeegloow si uu Boostada ugu hubsado se waxaa dhacay arrin lama filaan ah, waxay Ostan isla kulmeen saaxiibkiis Mohamed waa wiilkii ay maryan isku Fasalka ahaayeen 6A, markaas ayuu yiri yaad warqadda u Direysaa ?? oo ka dafay kadib uu Akhriyey qofka loo diraayo, markaas ayuu intuu Qoslay yiri ma Maryan ayaad jeceshahay ??? Maya ayaa Ostan ka soo fakatay se waxaan leeyahay gabar Inaadeertay ah ooy taqaano ha u geyso !!! Saxiibkiis baa ku yiri Saas naga dheh Jaceyl kuguma ogeyn ??? Ostan Neef baa ka soo booday wuxuuna goostay in uusan dirin warqadaan si aan loogu shabadeynin in uu Maryan jecel yahay ??? Taas oo waagaas ceeb aheyd in lagugu foorjeeyo Heblo ayuu jecel yahay ???xataa gabdhii la dhaho hebel baa jecel Ruuxaas Fursad ma siin jirin ??? Sababtoo ah Jaceylka waagaas ceeb buu dhallinta dhexdeeda ka ahaa !!! Ostan warqaddii buu intuu Baqshaddii ka bixiyey jeex jeexay oo ku asaasay Meel beer ah oo u dhaxaysa Tayeegloow iyo Tuulladiisii Shiiloow !!!!.
Markii la garay Bishii Janaayo 1975 Ardaydii Baadiyihii waa laga soo aruuriyey waxaa la iskugu keenay Tuulooyinka kadibna waxa bilowday in Dad iyo Xoolahaba la tiro koobo !!!!
Tira koob ay Qaramada Madoow soo Diyaarisay se AF soomaali lagu tarjumay ayey Ardeydii wadeen Bishii Janaayo oo idil, markay Dhameeyeenna waxay isku diyaariyeen in loo celiyo Mgaalo Madaxdii Muqdisho oo 7 bilood soo moogaayeen.
Waxay aheyd Abaarihii Bishii Febraayo 1975 waa bil aad u farxad badan si hal haleel ah ayuu Ostan u soo macasalaameeyey Dadkii ay is barteen ee Reer Shiiloow , ha ugu horeeyaan Saaxiibadiis Mad C/raxmaan iyo Mursal oo uusan ilaa maanta Hilmaamin 35 sano kadib.
Safarkii ay uga soo baxeen Tayeegloow waxay soo mareen Xudur ooy Ostan ku wada kulmeen Saaxiibkiis Hunboow oo Ardaal u eg macnaa ragga Dhallinta ah ee reer baadiyaha kuwooda Saarka dheela ee gabdhaha shukaansada ee Geel jirta ah ayaa la yiraahdaa ( ARDAL) Waxay leeyihiin Tin weyn oo xulbo la mariyo, gacantana waxaa ugu jira Barshin oo ah Qori ay barkadaan si aysan Tintu dhulka uga taaban.
Ostan iyo Saaxiibkiis Guray aad bay u qosleen markay Hunboow arkeen oo haddana Budh weyn wata qoortana kuul ugu xiran tahay !!!!!
Ostan iyo Ardeydii Dugsiga 21 Oktoobar markii ay Xamar ku soo noqdeen waxaa lagu soo dhaweeyey Degmada Waaberi oo aheyd Xaafadooda, halkaas baa Baabuurtii ay geysay Goor Maqrib ah !!! Ostan waxaa soo doonay wallaalkiis Cabdi Allaah yarxamuh.
Dhawr Habeen kadib ayaa Ardeydii Dugsiyadda oo dhan ee ka soo noqotay OHRM Casuumaad loogu qabtay Beerta Daraawiishta ee Taallada Sayid Mohamed Cabdille Xasan Hoosteeda ,ka soo horjeedka Baar Bulsho , waxaanna Muusig ka tumaayey Hobollada Qaranka waaberi, halgan, heegan, onkod,iyo Iftin iwm.
Dhallintii Ardayda ayaa isku hanbalyeynaysay gabdho iyo wiilalba, Dugsi Dugsi, koox koox iwm.
Halkaan Habeenkaas waxaa ka dhacay Arrin la yaab leh ama Murugo leh oo ku tusineysa Ostan sidii Jaceylkii Dugsiga Dhexe ugu sii siyaaday oo meel xun uu la gaaray !!!
Akhristoow waxaa dhacay in uu Ostan mar kaliya uu ku soo baxay Gabdhihii ay isku Fasalka ahaayeen oo meel tuban ooy Maryanna ka dhex muuqato !!!!.
Allaah waa Ostan soo dhawaaw ayey yiraahdeen mid mid ayuu u salaamay oo gacanta u galiyey markuu Maryan soo gaaray oo Geeska ugu jirtay ayuu is hayn waayey oo gacantii ka laabta oo iska baxay ???? Maryan wuu Salaami kari waayey ????!!!!
Markuu Arkay ayuu aad u naxay ilaa uu garan waayey waxa uu sameynaayo wuu iska cararay !!! Maryanna wey yaabtay waxbana ma dhihin xataa lama hadlin ??? ileen Labadooda ayaa Dad iskugu Dhawaa markay isku Fasalka ahaayeen !!! Tolow maxaa dhacay ??? !!! waa Sheeko Cusub oo uu isku Badalay Jaceylkii Dugsiga Dhexe !!!!
Sida aan Gadaal ka ogaan doono Maryan Habeenkaas kadib Ostan Colaad bay u qaaday !!!
Ostanna Jaceylkiisii wuu sii faafay Heer Cabsi ayuu isku badalay ??? Tolow maxaa xiggi ???
Waa inoo Qeybta 5 aad iyo Sheekaddii Runta & Xiisaha laheyd ee ( Jaceylkii Dugsiga dhexe )!!!!!
F.G sheekadaan waa Qiso run ah magacyada uun baa la badalay ??? walow ostan uu yahay Naaneysta wiilka ,Maryan se waa magaceeda runta ah
se ayadana Naaneysteeda ayey caan ku tahay sidaas baa looga reebay magaceeda.
Qore : ostan gacamay